Warbixin: Wax Ka Ogow Isbadallada Siyaasadda Soomaaliya 48-dii Saac ee Ugu Dambeysay – Goobjoog News
Tan iyo markii ay golaha shacabka kalsoonida kala laabteen ra’isul wasaare Xasan Kheyre iyo xukuumadiisa, waxaa isa soo taraya qeylaca beesha caalamka, Jaamacadda carabta, midowga Yurub iyo Mareykanka oo go’aankaas ugu yeeray sharci darro, mid wiiqaya dib u heshiisiinta, doorashada la filayo 2020, isla markaana u dhaartay dad ay ugu yeereen qas wadeyaal.
Saxiibada Soomaalida oo isugu jira dalalka iyo ururrada taageerada dowladda federaalka ah oo maanta qoraal soo saaray ayaa walaac ka muujiyey xiisadda lagu ceyriyey Xasan Cali Kheyre.
Kooxdan oo kala ah: Austria, Belgium, Boqortooyada Midowday ee Britain/Ingiriiska, Canada, Denmark, Dowladda Maraykanka, Faransiiska, Finland, Holand, Ireland, Itoobiya, Japan, Jarmalka, Kenya, Midowga Yurub, Norway, Poland, Qatar, Spain, Sweden, Switzerland, Talyaaniga, Urur Goboleedka (IGAD), Ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka, iyo Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale waxaa ay ka shaki qabaan in arrinta golaha shacabka ka dhacday ay wiiqi-doonto dadaallada loogu jiro is-faham siyaasadeed oo wadar-ogol ah oo laga gaaro doorashooyin waqtigooda ku dhaca, ayna carqaladayn doonto ajendaha dib-u-habaynta Soomaaliya, abuuri-doontana xasillooni darro dib u dhac ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda laga gaaray arrimaha hortabinta u leh qaranka.
Qoraalka ayaa lagu yiri “”Iyadoo laga walaacsan yahay isbeddelada siyaasadeed ee dhowaan dhacay, oo ay ka mid tahay tii baarlamaanka, saaxiibbada caalamiga ah ee Soomaaliya waxay carrabka ku adkeeyeen in nooc kasta oo doorasho ah oo uu soo rogo hal dhinac aysan sharci noqon doonin, islamarkaana aysan dhaqan-geli doonin; saaxiibbadu waxa ay ku boorrinayaan dhammaan daneeyeyaasha inay taageeraan heshiiska Dhuusamareeb; si loo ilaaliyo xasilloonida dalka; iyo horumarinta waxyaanaha mudnaanta qaran leh. Faah-faahinta”.
Saacado kadib ceyrinta golaha shacabka ee Xasan Kheyre, qoraal ka soo baxay midowga Yurub ayaa lagu sheegay in lagu baarayo wixii ka dhacay golaha shacabka, cidda mas’uulka ka aheyd iyo in arrintaas ay dib u keeni karto dib u dhaca horumarka Soomaaliya iyo in kale
“Midowga Yurub waxaa uu dib u eegayaa sida dhacada loo meelmariyey, cidda mas;uulka ka aheyd iyo in ay wiiqeyso horumarka Soomaaliya taas oo ay ku heshiiyeen beesha caalamka” ayaa lagu yiri.
Midowga Yurub waxaa ay ceyrinta ra’isul wasaare Xasan Kheyre ku sheegeen iney sharaci darro aheyd iyada oo ka digay iney dhaawaceyso heshiiskii Dhuusamareeb iyo balanta August 15.
Dhankooda, Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay waxa ay ugu yeereen habka qaloocan ee madaxweyne Farmaajo iyo golaha shacabka u mareen ceyrinta ra’isul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in go’aankaas oo sii hurinayo xaaladda qasan isla markaana uu laalayo heshiiskii Dhuusamareeb ee dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada.
” Habkan qaloocan waxaa uu dib u celinayaa dib u habeynno badan oo ay taageereen Mareykanka. Xasiloonida Soomaaliya, amniga iyo barwaaqyo waxaa lagu gaari karaa uun wada hadal, wada shaqeyn iyo isu tanaasul dhex mara hoggaanka Soomaalida” ayaa lagu yiri qoraalka Mareykanka.
Mareykanka waxaa ay sheegeen in ay taageerayaan doorasho laga wada tashtay iyaga oo ugu baaqay dowladda federaalka ah, dowlad goboleedyada iyo dhammaan saamileyda iney ka shaqeeyaan xasiloonida, amniga iyo inuu miro dhalo shirkii Dhuusamareeb.
Ugu dambeyntii, Waxaa ay Mareykanka u dhaarteen kuwa ay ku sheegeen “qas wadeyaal” iyaga oo yiri ” Waxaan tallaabo ka qaadi doonnaa kuwa qas wadeyaasha ah isla markaana caqabad ku ah horumarka laga gaaray xasiloonida, amniga, dowlad wadaagga iyo barwaaqada Soomaaliyda. Ma dooneyno in Soomaaliya jid qaldan lala aado” .
Marka loo soo noqdo gudaha Soomaaliya, waxaa ceyrinta Kheyre ka falceliyey saamileyda siyaasadda oo isugu jira maamul goboleedyo, ururo siyaasadeed iyo xubno ka tirsan baarlamaanka.
Madaxweynaha Puntland Saciid Deni oo arrintan ka hadlay ayaa yiri “Arrintaas waxaan mas’uuliyadeeda saarayaa madaxweynaha jamhuuriyadda, waayo wixii uu noosheegayey iyo wixii aan ku heshiinay dhan waxaan aheyn ayuu ku dhaqaaqay, habeenkii shirku dhacaayey innaga oo la nimidsam, khudbadihii dadkuna u arkaayeen kuwo isku soo dhaweyn ah, khudbaddiisa waxaa ay hordhac u aheynd inuu wixii aan meesha aan ku gaarnay uusan raali ka aheyn, ajandayaal kale uu watay, waxaana aad uga xumay wixii ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya” ayuu yiri madaxweyne Deni.
Madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh oo qoraal soo dhigay bartiisa Twetterka ayaa isna yiri “Fursado badan oo la seegay ayaa soo maray taariikhda dhismaha dowladnimada Soomaaliya, oo maanta uu mid cusub sameeyey hoggaanka jira. Waxaa loo baahanyahay go’aan xikmad leh si loo dhiso is afgarad siyaasadeed oo horay si wadajir ah loogu dhaqaaqo qabashada doorasho la aqbali karo, oo waqtigeeda ku dhacdo”.
Si la mid ah, ra’isul wasaareyaashii Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharma’arke, Cabdiweli Gaas ayaa sharci darro ku tilmaamay waxa ka dhacay golaha shacabka.
Waxaan weli hadal rasmi ah laga heyn hey’ado ay ka mid yihiin aqalka sare ee BFS, dowlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug.
Iyada oo taasi ay jirto ayey Villa Somalia waxaa ay ku-simme ra’isul wasaare u magacawday Mahdi Khadar Guuleed oo ku-xigeen u ahaa Kheyre halka ay ceyrisay xogheyihii joogtada ahaa ee xafiiska ra’isul wasaaraha.
Dhanka kale, shirkii ugu horeeyey oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirrada ee xukuumaddii dhacday ayey ku dhaleeceeyeen warka kasoo baxay beesha caalamka, iyaga oo ka dalbaday iney ixtiraamto madaxbannaanida Soomaaliya iyo go’aammada hey’adaheeda dastuuriga ah.
Villa Somalia ayaa loo fadhiyaa sida ay u maareyn laheyn arrimahan siyaasadda ah ee cakiran kahor muddo xilkeedkeeda dastuuriga ah ee magacaabista ra’isul wasaare cusub oo ah 30 beri oo laga bilaabo maalintii xilka laga qaaday Xasan Kheyre.
Beesha Caalamka oo War Cusub Ka Soo Saartay Soomaaliya
Guddoomiye Abuukar “ Yoonis Faarax Guul Iyo Horomar Ayaa U Rajaynaynaa”